warkii.com » Iska Illow Harry Maguire, Fernandes & Rashford &ndash; Xiddig Aanad Filayn Oo 16kii Ciyaarood Ee Ugu Dambeeyey Ee Man United Aan Laga Bidin Kusoo Bilowday
Iska Illow Harry Maguire, Fernandes & Rashford &ndash; Xiddig Aanad Filayn Oo 16kii Ciyaarood Ee Ugu Dambeeyey Ee Man United Aan Laga Bidin Kusoo Bilowday
Manchester United wax guul-darro ah lamay kulmin 16kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee dhamaan tartamada, waxaanay kusoo jirtay guulo iyo barbarro iyadoo, waxaanay taasi keentay inay kusoo dhowaadaan boosaska afraad iyo saddexaad oo Chelsea iyo Leicester City ay ku kala jiraan.
Kooxda tababare Ole Gunnar Solskjaer, waxa ugu dambaysay inay guul-darro la kulantay markii ay taariikhdu ahayd January 22, waqtigaas oo ay kooxda Burnley ku dhex garaacday garoonka Old Trafford.
Intii ka dmabaysay Man United may khasaarin ciyaar kaliyana, waxaanay usoo gudubtay semi-finalka FA Cup oo ay la ciyaari doonto Chelsea, halka ay tartanka Europa League wacdaro ka dhigayeen oo ay ku dhow yihiin inay iska xaadiriyaan wareegga siddeedda maadaama ay guul weyn soo heleen lugtii ay ciyaareen.
Bruno Fernandes ayaa loo nisbeeyaa isbeddelka weyn ee ku dhacay Manchester United intii ka dambaysay curashada sannadka 2020, laakiin waxa jira laacib kale oo dhamaan 16ka ciyaarood ee ka dambeeyay January 22 si joogto ah uu tababare Solskjaer ugu soo bilaabanayay.
Difaaca bidix ee Luke Shaw ayaa noqday ciyaartoyga kaliya ee kulan walba kusoo bilaabanayay safka hore, isla markaana aan wax guul-darro ah lasoo kulmin, waxaana uu ku mutaystay bandhigga wanaagsan eeuu muujiyey, iyadoo uu xataa fursad u diiddan yahay da’yarka Brandon Williams oo hadda loo carbinayo inuu beddel u noqdo.
24 jirkan oo waqtigii uu Jose Mourinho joogay Old Trafford dhaleecayn badan loo jeediyey, waxa uu sameeyey isbeddel ciyaareed oo laf dhabar u noqday Red Devils, isaga oo la yimid hab difaac sarreeya iyo weerarka oo uu qayb weyn ka qaato.